Delegasiona avy amin’ny Firenena maro no tonga manatrika izao fihaonana izao ka isan’izany ny avy any Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Togo, Comores, Centre Afrique, Algérie, France, Belgique, Réunion, Maurice, Mali, Congo, Gabon, Sénégal, Tchad, ary mahatratra 120 ny isan’ireo Mpandray anjara amin’ity Andiany faha XIII ity.
Lohahevitra iray lehibe no dinihina mandritra izao fianarana izao dia ny “Fanatontolona”. Betsaka ny olona te-hipetraka eto Madagasikara sy manerana an’i Afrika ka izany indrindra no anton’izao lohahevitra izao.
Manoloana io tranga io dia manolotra ny anjara birikiny ny Notaire amin’ny famahana ny olana rehetra na ara-tany na ara-pianakaviana ka nanolotra volavolan-dalàna iray ahafahana manoratra an-tsisiny ao amin’ny sora-pahafatesana ny fanamarinana ny maha-mpandova ny olona iray; faharoa dia ny fanokafana ny “fichier central de dernière disposition testamentaire” ka ny didim-panana rehetra voarain’ny Notaire iray dia soratana ao amin’ny « Chambre Nationale des Notaires ».